Yimiphi imishwalense ebophezelekile ukwenza isivumelwano? | Ezezimali Zomnotho
UJose recio | | Imikhiqizo yezezimali, Umshuwalense
Umshuwalense uyindlela yokumboza izingozi ngokuzidlulisela kumshwalense ozophatha ukuqinisekisa noma ukuvikela zonke izigameko noma ingxenye yazo. Kunoma ikuphi, kuyithuluzi elinamandla le- ukuvimbela noma isiphi isigameko nakunoma iyiphi indawo yempilo. Ngoba empeleni, kunezinhlobo eziningi zezinqubomgomo ngoba zimboza zonke izinhlobo zemisebenzi nezinqubo. Kunezempilo, ukuhamba, ikhaya, imoto, ukufa, ukonga, utshalomali ngisho nokuvikela izilwane ezifuywayo. Zingabhaliswa ngokuya ngezidingo zangempela zabasebenzisi, kungaba ngazodwana noma ngezinqubomgomo eziningana ngasikhathi sinye.
Kuze kube manje bekukholelwa ukuthi umshwalense ubungaphoqelekile ukwenza isivumelwano. Kepha lokhu akulona iqiniso ngoba amafomethi athile, namanje ambalwa kakhulu, adinga ngokuphelele ukwenziwa kwawo ngokusemthethweni. Kulula ukuthi ulazi leli qiniso ngoba ukungazibhalisi kungakubiza kakhulu kusuka manje kuqhubeke. Phakathi kwezinye izizathu ngoba baphatha izinhlawulo ezisindayo ezicatshangelwe ku- umthetho wamanje. Kuze kube seqophelweni lokuthi ingakha kabi isabelomali sakho noma somndeni nganoma yisiphi isikhathi empilweni yakho.
Ukuze ungenalo uhlobo oluthile lwezinkinga, iresiphi enhle kakhulu kuzoba ukwazi ukuthi imuphi umshuwalense ophoqelekile ukuwuqasha. Kukhona okungaphezu kokucabanga kwakho kusukela ekuqaleni futhi ezinye zazo ziqinisekile ngokujwayelekile kakhulu ku- okunikezwa izinkampani zomshuwalense. Ungathola nokumangala okungajwayelekile ohlwini lomshwalense oyimpoqo esizokunikeza wona ngezansi. Akumangalisi ukuthi aziwa kakhulu yingxenye enkulu yabasebenzisi abakulesi sigaba semikhiqizo yezezimali. Kusukela manje ngeke usaba nezaba ngolwazi lwayo olufanele.
1 Umshuwalense wokuqasha: imililo
2 Umshuwalense wezilwane
3 Umshuwalense ochwepheshe
4 Izinqubomgomo ezigunyazayo ohambweni
5 Ukuvikelwa kwezinto ozithandayo
6 Umshuwalense wokuqasha ekhaya
Umshuwalense wokuqasha: imililo
Ungahle ungazi kodwa ngesikhathi sokuthola izindlu nomhlaba kuzofanela wenze ngokusemthethweni umshuwalense womlilo. Izosebenza ukuvikela le ndawo kulezi zimo futhi kuzo zonke izimo kuzophoqeleka uma ungumnikazi wayo ngempela. Okuvame ukwenzeka ukuthi le nqubomgomo ekhethekile ivame ukufakwa phakathi kwalokhu umshuwalense wasekhaya. Lapho ezinye izinhlobo zokumboza zifakiwe ezisebenza ukuvikela ikhaya lakho ngokusebenza kahle kakhulu.
Kepha qaphela kakhulu, ngakho-ke umshwalense wasekhaya uqobo awuphoqelekile, ngaphandle kokucabanga kwabasebenzisi abaningi. Uma kungenjalo, kunalokho, umkhiqizo uyinqubomgomo yomlilo. Akunandaba ukuthi ukhetha yiphi ifomethi ekugcineni, kepha kufanele uhlale ukhumbula lokhu kuqaphela okuphawulekayo. Empeleni kungumkhiqizo onefayela le- imali ekhokhwa kakhulu ngonyaka yawo wonke amakhaya futhi lokho kungakusiza ukuthi uphume ezinkingeni ezingaphezu kweyodwa ezingavela ekhaya. Ngaphezu kwalokho, kungumkhiqizo ongaxakile kakhulu futhi cishe njalo uthengiswa ngaphansi kwezimiso ezifanayo zokuhweba.
Omunye umshuwalense olawulwa yilesi sici esikhethekile yilowo ohloselwe wona izilwane eziyingozi. Abantu abanelinye lalawa makhophi kumele babhalise umshwalense wale ndlela ukuze kugcinwe izehlakalo ezingase zivele phambi kwabantu besithathu. Ngoba uma kungenjalo, bazodalula izinhlawulo ezinzima kakhulu zokwephula imithetho yamanje yezilwane eziyingozi. Ngalo mqondo, lolu hlobo lomshuwalense alunakudidaniswa nalawo ahambelana nezilwane esihamba nazo. Ekugcineni, ziyimikhiqizo yomshwalense ehluke ngokuphelele, yize zinokufana okuningi phakathi kwazo.
Lokhu kungenye yemishwalense ephoqelekile nokuthi uma ukulesi simo kufanele uqede ngokushesha okukhulu. Vele, ngeke ube nenkinga yokuyiqasha ngoba zonke izinkampani zomshuwalense zicabanga ngenqubomgomo yalezi zici ekunikezelweni kwabo umshuwalense wamanje nangaphansi izindlela ezahlukahlukene ekukhangiseni kwakho. Lapho kubhekwa khona imininingwane yenja esemakhaya ethu.
Ungahle ungazi, kepha kukhona uchungechunge lomsebenzi noma imisebenzi yobungcweti edinga inkontileka eyisibopho yomshwalense. Ungathola imishwalense engaphezulu kwama-500 ukuthi ukwenziwa ngokusemthethweni kwayo kuyaphoqeleka ukuvikela abasebenzi. Emisebenzini yazo zonke izinhlobo futhi phakathi kwalokhu okulandelayo kuvela ukuthi sikudalula ngezansi:
Umshuwalense wobuchwepheshe (abasebenzi bezempilo, ukugcinwa kwezinsizakalo, njll.)
Umshuwalense weminye imisebenzi (imibukiso, ezolimo noma ezokwakha)
Kulezi zimo, kungumkhiqizo womshuwalense ovimbela izehlakalo ezithile emkhakheni womsebenzi futhi eziningi zazo zicace bha, ngokwesibonelo, lokho okuhlobene nabasebenzi abasebenza ezindabeni zezempilo noma zokwakha. Kuzo zonke lezi zimo ngeke babe nenye indlela ngaphandle kokuba nomshwalense lokho ukuvimbela kusuka ezinkambisweni ezithile emsebenzini. Kwezinye izimo, le yimisebenzi ebeka engcupheni enkulu ukuphepha kwakho. Kunoma ikuphi, kunokuntuleka okukhulu kolwazi ngalolu hlobo lomshuwalense ohlangothini lwabasebenzisi nokuthi baphoqelelwa ngabaqashi uqobo ukuba benze ngokusemthethweni inqubomgomo yabo ehambisanayo.
Izinqubomgomo ezigunyazayo ohambweni
Omunye wemishwalense ongaziwa ngokusetshenziswa kwawo okuyimpoqo yilelo ohlobene nohambo nokususwa kwabantu ezindaweni zokuhamba zomphakathi. Ngakolunye uhlangothi, ohambweni olwenziwe ngaphakathi kwedolobha elifanayo futhi ngokungangabazeki oludinga umshuwalense wabagibeli. Kodwa-ke, okuvame ukwenzeka kulawa macala ukuthi umshwalense uyi kufakwe kumthethosivivinywa lokho kuthengwa ukwenza uhambo. Ngalo mqondo, umsebenzisi akudingeki akhathazeke nganoma yini ngoba izidingo zabo zimbozwe kuzo zonke izimo.
Ngakolunye uhlangothi, futhi ukuhambela kwezinye izindawo, kungaba ngezakhiwo zabavakashi noma zebhizinisi, kuthwala isibopho sokuba nomshuwalense obavikelayo. Kepha njengakwisimo esedlule futhi ihlanganiswe ukubhuka kokuhamba. Lokho wukuthi, inkampani yezokuvakasha noma inkampani yezokuthutha yiyo ephethe. Futhi kulesi simo umsebenzisi ngeke akudinge ukuthi akubhalise, kepha kunalokho, kuzokhokhiswa intela mahhala kwithikithi elithengiwe. Kunoma ikuphi, kungenye yomshuwalense okufanele ube nawo kusukela manje kuqhubeke.
Ukuvikelwa kwezinto ozithandayo
Vele, lolu hlu alukapheli ngamacala adalulwe kuze kube manje. Vele akunjalo, ngoba umshwalense ohloselwe ukugcina ezinye zezinto zokuzilibazisa onazo untula. Njengesibonelo, uma uqhuba umdlalo lapho uhlangana khona noma umane wenza izinto ezijwayelekile njenge izikebhe zokuzingela noma zokuzithokozisa. Akumangalisi ukuthi umthetho wamanje uphoqa ukuthi ubhalise inqubomgomo yezikweletu zomphakathi ecabanga ngomonakalo odalelwe abantu besithathu ngenxa yokuthuthuka kwale misebenzi. Lokho wukuthi, uma lokhu kuyicala lakho elithile, awunaso esinye isixazululo ngaphandle kokwenza inqubomgomo yalezi zimfanelo ibe semthethweni uma ungafuni ukuba nenye inkinga yokuyithuthukisa ngokujwayelekile. Ngoba ungabuye ujeziswe kanzima uma wehluleka ukuthobela le mfuneko.
Elinye lamacala amelwe kakhulu elabantu abenza ezemidlalo futhi ababamba iqhaza emincintiswaneni. Badinga umkhiqizo ukuthi vikela futhi ulondoloze noma isiphi isigameko ukuthi bangakhula ngomkhuba walowo mdlalo. Lokhu kuyinto efinyelela emijahweni ethandwayo nokuthi uma ubhalisa ngokuzenzakalela unomshuwalense walezi zici. Abahleli baphoqelekile ukuthi banikeze le nsizakalo abasubathi. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa emcimbini wezemidlalo uqobo.
Umshuwalense wokuqasha ekhaya
Okunye ukungabaza ukuthi abasebenzisi abazoqasha ifulethi ukuqasha ukuthi ngabe banesibopho sokusayina inqubomgomo yomshuwalense. ukuqashwa. Kulokhu, akuphoqelekile naphezu kwenkolelo ejwayelekile. Kodwa-ke, ukwenziwa kwayo ngokusemthethweni kunconyelwa kakhulu ngoba kuyindlela esebenzayo yokuvikela futhi gcina izakhiwo zayo. Isibonelo, imishini yamakhompiyutha, amadivayisi wezobuchwepheshe noma ngabe ngabe kunjalo bekuyizingubo noma ifenisha uqobo. Akumangalisi ukuthi lezi zakhiwo azimboziwe ngumshuwalense wabanini bezindlu nganoma iyiphi indlela.
Ngakolunye uhlangothi, kusuka kolunye uhlangothi, okungukuthi, umnikazi wendawo yempahla, kufanele futhi aqedele umkhiqizo walezi zidingo. Njengoba ungamukela omunye umshuwalense ukuvikelwa kokukhokha futhi ozokhokhwa ngakho ngaphambi kwezinqubo ezithile ngokungabikho kweqoqo lezinkokhelo zenyanga. Vele, akuphoqelekile, kepha kuyathandeka ngokuphelele ngoba kunikeza ukuphepha okuningi esimweni sakho somnikazi.
Njengoba sishilo phambilini, uma kukhulunywa ngezindlu nezakhiwo, okuwukuphela kwento edingwa ngumthetho ngumshuwalense womlilo. Konke okunye kungakhethwa futhi kuncike entandweni yabasebenzisi ngokwabo. Ngisho nangesikhathi sokusayina imalimboleko yempahla ebanjiswayo, yize amabhange efaka ezinye izinqubomgomo zokucubungula. Kungaba isu lokwehlisa izindleko zokugcina zezimali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Umshuwalense » Yimiphi imishwalense ebophezelekile ukwenza isivumelwano?
10 okhiye bokutshala imali kalula